Ny fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin'ny Statistisk lesbarhet Ord
Fehezam-boninahitra iray isaky ny manoratra amin’ny vahoaka dia ny ankamaroany dia mamaky amin’ny enina amin’ny faha-enim-bolana amin’ny famakian-teny. Raha ny ankamaroan’ny Amerikanina sy ny har dia mandroso firenena mamaky teny, ny habetsaky ny fahaiza-mamaky boky dia mety miovaova be.
Alao sary an-tsaina ny fahasamihafan’ny mpihaino anao. Ny olona voalohany mitsidika ny tranokalanao dia mety hamaky amin’ny ambaratonga oniversite ary mahatakatra teny lehibe, fa ny mpitsidika tranokala manaraka dia mety mila rakibolana mba hahalala ny zavatra lazainao. Tena mahakivy izany ary eo amin’ny tontolo an-tserasera, izay tian’ny olona ny fampahalalana eo no ho eo, ny tranga vaky ny mpamaky iray mandany fotoana hikaroka teny tsy mahazatra dia somary mangatsiaka iany. Mamadika mpamaky fotsiny ianao.
1.3 Statistikk Lesbarhet Statistikk
Misy fitaovana an-tserasera tsara iray antsoina hoe Paper Rater izay ampiasaiko indraindray handinihana ireo lahatsoratra ireo, indrindra raha reraka aho rehefa manoratra na amin’ny fe-potoana haingana izay tsy mamela ny fanoviro maidahra matika fahra matika Paper Rater ity manaraka ity:
Best av alt? Ny mpanolotra taratasy dia afaka amin’ny dikan-teny fototra. Raha te hahazo dikan-doka tsy misy adirey ianao, dia afaka mampiasa vola ao amin’ny Premium Paper Rater.
Statistikk Lesbarhet Statistikk
Mihoatra noho ny azo inoana, dia efa mampiasa safidy fanamarinana ny fitenin’ny teny ianao. Na izany aza, azonao atao koa ny manome lalana ny Flesch Les Ease sy Flesch-Kincaid Level Level i Microsoft Word.
Rehefa vita ny safidy vaovao dia tsindrio eo amin’ny “Fisehoana” eo amin’ny ilany havia (jereo ny sary etsy ambany).
Eo ambanin’ilay fizarana mitondra ny lohateny hoe “Rehefa ny fitipi-pitenenana sy ny fifehezana amin’ny teny” dia tokony hanamarina boaty roa.
Voalohany, tadiavo ilay boaty manaraka ny “Manamarina ny fitipi-pitenenana amin’ny tsipelina.” Ity boaty ity dia tokony ho voamarikao mba hahafahanao mametaka antontan’isa.
Jereo indray ny boaty manaraka ny “Asehoy ny antontan’isa azo vakina.”
Kitiho ny boaty “OK”.
Ny fanamarinana ny haavo an’ny kilasin’i Flesch-Kincaid dia manazava tsara. Ho hitanao amin’ny santionany etsy ambony fa ny soratra dia amin’ny 9.3 na volana fahatelo amin’ny taona fahasivy. Mba hahazoana ny atiny ho amin’ny ambaratonga ambaratonga fahavalo, izay tiako, dia afaka manaisotra fotsiny ilay teny hoe “mahafinaritra” aho izay mitondra azy amin’ny isa 8.8.
< Satus Blogging pro – cur Aenean eget ante sit pars pars vestra Plan Denuo > Sidee loo sameeyaa lacag dheeraad ah Blogga: Fikradaha Niche & Istaraatiijiyada